Horudhaca kulanka lugta labaad ee isreeb-reebka Champions League kooxaha AS Roma vs FC Porto – Gool FM
Alexis Sanchez oo qalliin ku maray Magaalada Barcelona & Kooxda Inter Milan oo bayaan ka soo saartay
Maamulka Kooxda Real Madrid oo macallin Jose Mourinho weydiistay inuu iyaga sugo
De Gea, Pogba, Wan-Bissaka… (Manchester United oo wajahaysa Liverpool iyadoo ay ka maqan yihiin siddeed ciyaaryahan)
Guardiola oo diyaar u ah inuu dagaal la galo Real Madrid iyo Barcelona, sababa la xiriira saxiixa bedelka Aguero
Muxuu ka yiri Mauro Icardi kooxda Inter uu hoggaaminayo Antonio Conte & imaatinka Lukaku?
Horudhaca kulanka lugta labaad ee isreeb-reebka Champions League kooxaha AS Roma vs FC Porto
(Rome) 23 Agoosto 2016 – Kooxaha Roma iyo Porto ayaa caawa wada ciyaari doona kulanka labaad ee isreeb-reebka Champions League, iyadoo la xusuusto kulankii lugta hore ay labadan kooxood ku soo kala baxdeen barbaro 1-1.
Kooxaha: AS Roma vs FC Porto
Tartanka: isreeb-reebka Champions League
Saacadda geeska Afrika: 9:45 Habeenimo
Garoonka: Stadio Olimpico (Rome)
>- Kulankii lugta hore ee ka dhacday dalka Portugal ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee ay labadaan kooxood kulmaan muddo 15-sano kaddib.
>- Kooxda FC Porto ayaa wax guuldarro ah la kulmin saddex kulan oo ay tartammada UEFA ku wajahday AS Roma, waxa ay guul ka gaartay hal kulan, halka labada kulan ee kalena ay barbaro ku kala tageen.
>- Rikoodh fiican kuma haysato kooxda FC Porto, marka ay booqato dalka Talyaaniga, 12 kulan oo ay booqatay dalkaasi waxa ay guuldarro la soo kulantay 6 jeer, 3 barbaro ayey ku soo gashay, halka 3 kale ay guul ku soo heshay.
“Guardiola guulo wuu la gaari doonaa Manchester City, laakiin waqti ayuu u baahnaan doonaa “ – Michael Ballack
Horudhaca kulanka caawa ee League Cup kooxaha Burton Albion vs Liverpool